Ngokuvamile lapho kusetshenziselwa imifula yemifula ephakanyiswayo yokutshala izimpahla kanye nokuhlala emazweni asemakhaya, eyakhelwe ngamatshe. Lesi sici sokuklama kwensimu sisebenza ngokukhethekile ekuklanyeni kwezindawo ezihlala phansi. Ngosizo lwama-imibhede enjalo yemifula, ukukhululeka kungabonwa ngendlela ebonakalayo, ngaphandle kokudala imithambeka nemifula.
Ama-flowerbeds akhiwe ngamatshe ngezandla zawo siqu, eyenziwe engxenyeni engadini, enenzuzo eningana. Ngakho-ke, uma inhlabathi isindayo, khona-ke iyokwenza ngcono amanzi, futhi uma i-alkaline, izosiza ukudala izimo eziyinkimbinkimbi. Izakhiwo ezinjalo zibonakala kangcono ensimini futhi ziheha bonke abantu. Kuzo, ngokuphumelela okukhulu, ungakhula izitshalo eziphansi ngezitshalo ezincane noma, ngokuphambene, izimbali ezinkulu nezikhanyayo eziziqhenyayo engadini.
Kulula kakhulu ukunakekela umbhede ophakanyisiwe, ngoba awudingi ukugoba kakhulu. Uma ubeka umbhede wamatshe ngamatshe ngezandla zawo, ububanzi nokuphakama kungenziwa ukuze kube lula ukusebenzisana nabantu abahamba ngokulinganiselwe nabadala. Izitshalo ezitshalwe kuwo ngokuvamile zinekhala elingaphezulu, ngakho bazizwa kangcono kakhulu.
Ngokuvamile imibhede enjalo imbali iphakama ngaphezu kwemitha engama-1. Uma kuhlelwe ukwakha indawo enkulu nenkulu yesakhiwo, kufanele ifakwe kwisisekelo. Ngakho-ke, ungenza kanjani umbhede wamatshe engadini yakho?
Ukwakha akulula neze, ngakho akudingekile ukufaka isicelo sosizo ochwepheshe. Okokuqala, udinga ukukhetha indawo isakhiwo esizayo, umaka esigabeni somngcele waso futhi unqume ukuthi yikuphi ukuphakama okuyoba khona. Ukwakhiwa, amatshe wemvelo kanye nokufakelwa kuvame ukusetshenziswa. Amatshe ayimvelo angcono kakhulu. Zibukeka zihlobisa kakhulu futhi zizokwazi ngokuphelele ukuklama kwanoma iyiphi ingadi.
Izinto ezinjalo zinamandla kakhulu. Ukukhathazeka okuwukuthi amatshe awawona ama-rectangular shape, ngakho-ke ukuzwakalisa kwabo kuyinkinga.
Lapho udala umbhede wamatshe wezandla ngezandla zakho, kutuswa ukuba uthele umhlaba phakathi kwamatshe. Okokuqala, amatshe amakhulu kunawo wonke abekwa emgqeni odwetshiwe emhlabathini. Ngesikhathi esifanayo, badinga ukujula emhlabathini, ukuze bangadli. Emva kokuthulula inhlabathi, qhubeka emgqeni wesibili. Uma amatshe ehlelwe ngesisombululo, khona-ke phansi kufanele wenze izimbobo zamanzi amanzi.
Kuye ngezinhlobo zezitshalo ezihlelwe ukuba zitshalwe embhedeni onjalo, inhlanganisela yenhlabathi yesakhiwo esiyifunayo ithululelwa. Ubuningi bomhlabathi bubekwa futhi bubekwe eceleni ukuze uvumele umhlaba ulungise kancane. Khona-ke ungaqala ukutshala izitshalo. Ngakho kubalulekile ukubuka ngokucophelela, ukuthi umhlaba wawungaphansi kwezindonga. Ubuningi bomhlabathi emva kokutshala kufanele buhlanganiswe negravel encane noma itshe eliphukile. Lokhu kuzoba umhlobiso owengeziwe wombhede wembali futhi kuzokwehlisa ukukhuphuka ngokweqile komswakama, okuzoba nomphumela omuhle ezitshalweni.
Ama-flowerbeds amatshe ngezandla zabo angakhiwa ngobukhulu obukhulu futhi atshalwe kuzo izinhlobo ezincane zezitshalo nezihlahla. Ezinkathini eziphakathi kwamatshe, intsha, i-sedum, i- Bell Carpathian, i- thyme nezinye izitshalo ezingavumelani nesomiso zizobonakala zikhulu.
Kulezi zibhulabhaka kudingekile ukuba utshale izitshalo ezinganqamuki, kusukela ebusika inhlabathi ibanda kakhulu. Ngaphezu kwalokho, ehlobo inhlabathi kubo iyancipha ngokushesha kunokuba iphansi, ngakho ukuchelela izitshalo kumele kube njalo futhi uhlale.
I-flowerbed eyakhiwe ngezandla zayo ezenziwe ngamatshe endaweni yensimu iyoba umhlobiso wayo wangempela futhi izokwenzela abagadi balimi abadinga kakhulu futhi abahle kakhulu.
Isihlahla sama-apricot: izinhlobo, ukulima, ukunakekelwa
I-Wisteria isiShayina. Izimfihlo zokunakekelwa
Chalcedony izakhiwo itshe: le umenzi wemilingo nangokuthi yini umphulukisi ekhaya lakho
Funny ekubingeleleni ingane emshadweni